Haweeney magaceeda ku aragtay “barta aargudashada” oo argagaxday | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
ARIMAHA BULSHADA Haweeney magaceeda ku aragtay “barta aargudashada” oo argagaxday
Haweeney magaceeda ku aragtay “barta aargudashada” oo argagaxday
Haweeney ayay argagax iyo amakaag ku noqotay in ay ogaatay in macluumaadkeeda shaqsiyadeed lagu baahiyay bog internet-ka ah oo ay ku jiraan diiwaanka dumar ay koox rag ah ka sheekeysanayaan ayna aflagaadeynayaan.
Becky, ma ahan magaceeda dhabta ah, waxay ogaatay in magaceeda iyo meesha ay ku nooshahay la geliyay bog lagu magacaabay “barta aargudashada qaawnida”, halkaas oo kumannaan kale oo dumar ah ay ku jireen.
Gabadha oo 22 sano jir ah, una dhalatay Britain waxay ogaaday in ereyo kala duwan meesha la geliyay kuwaas oo lagaga baxsanayo baraha raadinta macluumaadka.
Boggaas, oo BBC aysan magacaabeyn, wuxuu sheegay in laga saaray dhammaan macluumaadkii been abuurka ahaa.
Becky waxay aragtay magaceeda iyo magacyada seddax gabdhood oo saaxiibbadeed ah oo bartaas lagu daabacay. Waxaa kale oo meesha ku jiray magacyada dumarkale oo daafaha caalamka ku kala nool.
Walwalkeeda waxay ku muujisay farriin ay Twitter-ka dhigtay oo kumannaan qof oo kale ay sii baahiyeen, waxaana bogga lagu arkay muuqaallada dumar la kufsaday, kuwo jirkooda la qiimeynayo oo laga sheekeysanayo iyo sawirrada carruur lagu xadgudbay.
Ragga boggaas ku jiray waxay sidoo kale dalban karaan macluumaadka iyo meesha ay ku nooshahay qofka dumarka ah.
Becky waxay BBC-da u sheegtay: “Waxaa la igu dhex daray seddax dumar oo kale. Laba ka mid ah waa saaxiibbadeyda ugu wanaagsan, midna waxaan isla dhiganay iskuulka, dhammanteenna deris ayaan nahay.
“Haddaba, waxaa cad in qofka daabacay uu yahay mid aan garaneyno kaas oo raadinayay macluumaadkeena iyo sawirradeena.
“Waa waxay la mid tahay ‘qof kan maalin kasta ma aragnaa? ma isla hadalnaa?’ haddaba waxaan geliyay Twitter-ka, aragtidii ay ka dhiibteenna waala tirtiray.
“Way muuqataa in ay arkeen, mana doonayaan in la ogaado. waa wax laga naxo.
“Waxay soo socotay illa 10 sano, waxay soo billaabatay 2010-kii. Waxaan wacay booliska waxayna ii sheegeen in aysan waxba ka qaban karin sababtoo ah ma garanayaan qofka leh boggaas.”
Bogga wuxuu taageerayaasha ugu sarreeya u ballanqaaday “in culeyska muuqaallada loo kordhinayo maalin kasta”. BBC ayaa ogaatay in laga maamulo dalka Finland.
Kumannaan dumar ah oo saxiixay warqadda dacwad oo ka dhan ah bartaas ayaa lagu dalbaday in la xiro ka dib markii Becky ay fashilisay.
“Waa bog aad u weyn booliskana waxba kama qabanayaan,” ayey tiri. “Booliska waa in ay halkan u joogaan in ay ku difaacaan. Ma rumeysan karin in dadka ay dhab ahaantii taas dhan kale u weeciyeen.
“Waxaan la hadlay gabdho kala duwan, mid ka mid ah waxay ahayd 13 sano jir markii sawirradeeda lagu bahiyay bartaas, waxayna ahayn qofkii ugu da’yaraa ee aan la sheekeystay, waxaa kale oo jiray kuwo igu da’ ah. Dhammaan waxay da’dooda u dhexeysay 13 illaa 25 sano.
BBC ayaa Email u qortay kuwa ka shaqeeya bartaas waxayna ku soo jawaabeen: “Dhammaan macluumaadka ku jira boggeena waxaa soo daabacay dadka isticmaala ee aan la aqoon ee daafaha caalamka ku kala nool, ma ahan wax magaca web-ka lagu baahiyay.
“Waxaa sameynaa howl malmeed aan ku kala nadiifineyno, waxaana jiro shuruuc cad oo la xiriira waxa la ogol yahay in la baahiyo, Sidoo kale waxaan bixinaa warqadaha muujinaya in waxyaabaha qaar laga saaray bogga kuwaas oo sharci daro ah ama wax u dhimaya xuquuqda lahaanshaha.
“Maadaama aan leeyahay 28 milyan oo qof oo sannadkiiba isticmaala boggeena, dhib ayey nagu noqotaa in aan xaqiijino kuwa sharcigeena jebinaya, markii wakhtiga uu noo saamaxana waan ka saarnaa.”
Det Insp Jim Forster oo ka tirsan booliska UK wuxuu yiri: “Xadgudubka [aargudashada qaawnida] waxay la xiriirtaa qofka sii baahiya sawirka, waana xiri karnaa qofkaas, waana lala tacaali karaa, waxaana lagu xukumayaa illaa laba sano oo xabsi ah”.
Wuxuu sheegay haddii kiiska ay ku lug leeyihiin shirkadaha waaweyn sida Facebook ama Snapchat, waxay aalaaba aqbalaan dalabaadka wayna ka saaraan waxyaabaha lagu baahiyo, laakiin kuwa aan la garaneyn ama bogagga ay burcadda sameytaan, waxay markastaa diidaan dalabaadka booliska.
“Way yartahay in awood loo yeesho dabagalka qofka leh boggaas haddii uu dal kale ku sugan yahay,” ayuu yiri. “Xaqiiqada waxay tahay in sawirradaas meesha laga saaro in ay tahay wax aan amrnaba dhici karin – waa habeenkii xalay tagay oo kale.”
Previous articleSargaal saameyn xoogan kulahaa Shabaab oo dileyn ciidamada Mareekanka iyo kuwa Soomaalida
Next articleMarkaan u tagay waxay iigu hanjabeen inay igu sameyn doonaan wixii ay wiilkeyga ku sameeyeen
Madaxweyne Erdogan oo Aargoosi ku hanjabay kadib weerar lagu dilay Ciidamo Turki ah
SAWIRRO:Qaraxyo iyo rabshado gilgilay caasimadda Itoobiya iyo magaalooyin kale
XOG:Qorshe xabsiga loogu taxabaayo Sanbalooshe oo kasocda Villa Somalia iyo shaqsiyaad…
Wararkii ugu dambeeyey deegaanadii lagu dagaalamay ee Gobolka Mudug & Cabsii dagaal oo jirta
DAAWO-Taariikh Nololeedkii Marxuum Cabdirashiid Maxamed Xirsi..
Guddoomiye Mursal oo shir xasaasi ah isugu yeeray guddiyada joogtada ee golaha shacabka
Qarax Xoogan Oo Ka Dhacay Muqdisho+Khasaaraha Ka Dhashay (Cida Lala Beegsaday)
Ruushka Muxuu ka yiri Xaalada Somalia iyo isbadalka Geeska Afrika..
DEGDEG: FIFA oo dooratay Dalalkii martigelin lahaa Koobka Adduunka ee K/cagta Sanadka 2026..